Can Thi Thêu Vietnamiàna Mpikatroka Mafana Fo Miady Ho An’ny Fananantany, Niaritra Herisetra, Fisamborana Sy Fonja · Global Voices teny Malagasy
Can Thi Thêu Vietnamiàna Mpikatroka Mafana Fo Miady Ho An'ny Fananantany, Niaritra Herisetra, Fisamborana Sy Fonja
Voadika ny 08 Oktobra 2016 6:15 GMT
Notànana in-droa noho ny fikarakarana angon-tsonia manohitra ny fandroahana amin'ny tany i Can Thi Thêu.
Ity lahatsoratra navoakan'i Giang Nguyễn ity dia avy amin'i Loa, vohikalam-baovao tsy miankina sy “podcast” izay maneho tantara mahakasika an'i Vietnàma, ary naverina navoakan'ny Global Voices ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mitantara ny tantaran'i Cấn Thi Theu, mafana fo miady ho an'ny fananantany izay nosamborina tamin'ny volana Jona lasa teo, noho ny ‘fanakorontanana filaminam-bahoaka’ nandritra ny fihetsiketsehana iray. Voasazy 20 volana an-tranomaizina izy tamin'ny 20 Septambra.
Lasa mponina tao Dương Nội, tanàna ao ivelan'i Hanoi i Cấn Thị Thêu, 53 taona, taorian'ny nanambadiany tantsaha teo an-toerana. Tamin'ny faran'ny taona 2007, nalain'ny governemanta ny tanin'ny fianakaviany, ary lasa mpikatroka ho an'ny fananantany izy. Hoy izy tamin'i Loa:
Tany fonenako i Dương Nộino. Tiako raha manana trano ny zanako. Fony aho nipetraka tao Dương Nội, tantsaha nahomby aho . Nanana omby 40 hatramin'ny 50, zaridainam-boankazo sy legioma, dobon-trondro. Namokatra tsara izany. Fa nony tonga ‘naka azy indray’ ry zareo, nosimbàny ny zava-drehetra, ny trano fitehirizam-bokatra, ny dobo. Very ny fihinananay. Ankehitriny, sarotra ny fiainana.
Nampiasain'i Thêu ny teny hoe ‘naka indray” satria ao Vietnàma, tsy an'ny mpamboly ny tany, na ara-teknika dia tsy an'ny olona rehetra. Mifototra amin'ny fambolena ny toekarena ao amin'ny Repoblika Sosialista ao Vietnàma ary ny tany dia heverina fa ‘fananam-bahoaka’ . Manana zo hampiasa ny tany ny tsirairay, fa tsy tompony velively. Midika izany fa tsy maintsy mamoy ny faritra eo alohan'ny tranony ny mponina ao an-tanàna mba hahatonga izany ho làlana raha mitaky izany ny fanjakana. Mety ho tojo fangihazana ny sahany ny fianakaviana tantsaha iray, na dia efa nifandimbiasan'ny taranaka maro aza izany.
Ny governemanta no mitantana ny fampiasana ny tany. Miaraka amin'ny fientanana malakin'ny fandrosoana ara-toekarena ao Vietnàma tato anatin'ny taompolo telo farany, ary ny tanimbary izay manokatra làlana vaovao hoan'ny fampandrosoana, manomboka mikoa ilay rafitra marefo kely.
Nanazava ny fitondrana tsy an-drariny nahazo azy ireo i Theu:
Vola 200.000 đồng (9 dolara amerikana) monja isaky ny metatra toradroa no nomen-dry zareo anay, nefa eny an-tsena, amidin-dry zareo manomboka amin'ny 31 tapitrisa đồng isaky ny metatra toradroa. Efa ho in-200 ny vola omeny anay. Amn'io vidiny tsy rariny io, ary noho ny olona tsy mety mahita asa vaovao, olona maro no lasa mahantra sy tsy an'asa. Izany no antony tsy anekenay ny fakàna indray ny taninay. Mandroba anay an-jambany io vidin-javatra io.
Cấn Thị Thêu, ny vadiny ary ny zanany lahy roa dia iray ihany amin'ireo fianakaviana maherin'ny 350 any Dương Nội monja, izay hany nitaraina ny manjò azy ireo tany amin'ny manampahefana ary nanao fanangonantsonia ho fanarenana.
“Misy an'analinaliny angamba amin'izy ireo’, hoy Dũng Mai, mpanakanto avy any Hà Nội. Nanomboka ny 2012, nitantana vondrona iray izy, antsoina hoe Cứu Lấy Dân Oan (Fanampiana ireo mpanao Fitakiana Tany).
Mai sy ireo mpiasa an-tsitrapo ho an'ny Fanampiana an'ireo Mpanao Fitakiana ny Tany dia mampiasa ireo fanomezana avy amin'ny tsy miankina mba hanomezana ny zavatra ilaina isan'andro hoan'ireo mpanao fitakiana ireo mandritra ny fipetrahan'izy ireo ao Hanoi. Milaza izy fa afaka mahita asa an-tselika ny sasany, toy ny manasa lovia, mandritra ny fotoana ipetrahany ao an-drenivohitra, saingy zara raha velona fotsiny ny sasany.
Tsy manana asa izy ireo, tsy manana trano. Vao haingana kely, tsy maintsy nividy fialofana izahay mba hiarovana azy ireo amin'ny orana sy ny masoandro, noho izany afaka mahita fialofana amin'ny sisin-dalana, hazo na amin'ireo trano manana tafo lehibe ry zareo mba hahafahany mialoka. Nividy lamba matevina ho azy ireo izahay mba handriany. Mangatsiaka ny tany ary raha tsy misy lamba matevina, mety ho lena izy ireo. Tena mafy ho azy ireo izany..
Manohitra ny fitsarana an'i Cấn Thị Thêu mpikatroka mafana fo miaro ny zo hanana tany ny olona, ary voasakana tsy mahazo miditra ao anaty efitrano fitsarana ireo avy amin'ny fianakaviany sy ireo olona mpanohana azy. Hoy ny sorabaventin'izy ireo:” tsy manan-tsiny i Cấn Thị Thêu” ary “Asa ratsy ny fisamborana olona sy fangalarana ny taniny”. Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'i Trịnh Bá Phương.
Araka ny tatitra vao haingana avy amin'ny Fandraisana andraikitra ara-tSosialin'ny Vondron'orinasa any Azia, tombanana ho ny 80% ny fitarainana napetrak'ireo olona tezitra any amin'ny manampahefana dia mifandray amin'ny ady tany sy onitra tsy ara-drariny.
Miha mitombo hatrany io isa io, ary ny feon'ny vehivavy no maro an'isa amin'izany.
Angamba noho ireo vehivavy tezitra ireo, ary anisan'izany koa ireo lehilahy tsy matahotra na iza na iza intsony, no antony nanan'izy ireo fahavononana hahafoy ny zavatra rehetra toy izao.
Ireo rakitsary tsy matihanina mahakasika ny fakàna an-keriny ny tany dia mampiseho ny daroka ataon'ireo lehilahy manao fanamiana sy jiolahimboto lazain'ireo tantsaha fa polisy manao fitafin'olontsotra.
Tsaroan'i Thêu tsara ny fifandonana iray.
Tamin'ny 25 Aprily 2014, polisy sy hery fiarovana sivily an'anarivony no tonga nandrava ny tany izay tsy mbola nandraisanay vola akory. Tanam-polo izahay, kanefa izy ireo nanana langilangy, kibay ary basy. Nitsangana teo ambony tranoheva namboarinay aho mba hitazana ny eny amin'ny fasana. Nitsangana teo aho handrakitra an-tsary ny zava-niseho, ny fampahoriana nataon'ny manampahefana taminay. Nosamborin'izy ireo ny olona, ary nokapohan'izy ireo tamin-kabibiana. Naka sary fotsiny aho. Avy eo nanatona ahy ry zareo. Naka ny fakantsariko, nikapoka ahy. Tsy fantatro hoe hatramin'ny oviana aho no tsy nahatsiaro tena. Nony nifoha aho, tao anatin'ny faritry ny foiben'ny polisy tao amin'ny distrikan'i Hà Ðông no nisy ahy.
Niaraka voasambotra sy voadaroka izy sy ny vadiny, hoy izy. Nolaniany tany am-ponja iny taona lasa iny, miaraka amin'ny vesatra “fanohintohinana olona manao ny asany’ araka ny andininy faha 257 amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Nilaza koa izy hoe voadaroka ary nandeha rà koa ny zanany tamin'ny fotoana hafa.
Rehefa avy niady nandritra ny efa ho valo taona, hita indray eny anoloana izy tamin'ny tapaky ny volana Septambra, niaraka tamin'ireo am-polony maro mpiray vodirindrina ao Dương Nội sy ireo mpanao fitarainana avy lavitra, natory nandritry ny alina teo anoloan'ny foiben'ny mpitandro filaminana. Nampangain'izy ireo ny fampitahorana sy ny fampielezankevitra fanalam-baràka nataon'ny polisy vao haingana..
Nolazain'i Thêu fa nahazo fandresena ny vondrona, rehefa avy nifampiraharaha momba ny fandaharam-potoana sy ny fandraisan'anjaran'ireo mpivory, ny ampitson'io nilaza taminy ny olom-panjakana iray fa manana zo hametraka fitarainana tsy misy fanelingelenana ny olona, ary mahazo mandray vola fanomezana ary hanao fanamiana maneho fanoherana.
Milaza i Thêu fa na avy amin'ny alalan'ny angon-tsonia, fanoherana na fandraisana andraikitra eo an-toerana, tsy hijanona izy raha tsy miverina aminy indray ny taniny.
Afaka mamono ireo olona 5 amin'ny ankohonako ry zareo. Nefa heveriko fa indray mandeha ihany ianao no velona ary indray mandeha ihany no maty. Noho izany, hiaina aho amin'ny fomba izay hahitan-dry zareo fa tsy hampatahotra ny finiavanay hiady amin'ny herisetrany. Izahay mpanao fitakiana ny tany dia hifikitra amin'ny taninay hatramin'ny farany.
Mandritra izany fotoana izany, mbola mitoetra ho tsy misy mpikarakara sy tsy mivoatra ireo fananan'i Thêu taloha, efa ho valo taona taorian'ny fandroahana azy.
Henoy misimisy kokoa ao anatin'ity rakipeo ity ny tantaran'i Cấn Thị Thêu :